Vaovao - Fanohanana avy amin'ny kilaometatra an'arivony maro hiantohana ny famatsiana: TIANGEN Biotech amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso NCP manerana ny firenena
Hatramin'ny niandohan'ny taona 2020, ny pnemonia coronavirus vaovao dia niparitaka hatrany Wuhan ka hatrany amin'ny faritra rehetra any Chine ary niteraka ny ahiahin'ireo olona an-tapitrisany maro. Ilay virus coronavirus dia azo ampitaina amin'ny alàlan'ny fomba sy fantsona maro samihafa miaraka amin'ny areti-mifindra mahery vaika. Noho izany, ny famaritana mialoha sy ny fitokana-monina no lohalaharana amin'ny fisorohana sy fifehezana azy.
Amin'ny maha-orinasa lehibe amin'ny famatsian-tsolika ny fitrandrahana asidra niokika sy ny mpamantatra ny zava-mahadomelina ao Shina, TIANGEN Biotech (Beijing) Co., Ltd. dia nanome fanampiana ho an'ny famaritana sy fisorohana ireo valanaretina viralin'ny firenena im-betsaka taloha, ary nanolotra fitaovana maherin'ny 10 tapitrisa mifandraika amin'ny fitiliana viriosy toy ny aretin'ny vava-tanana sy valanaretina gripa A (H1N1). Tamin'ny taona 2019, TIANGEN Biotech dia nanolotra mpitrandraka asidra nokleika an-jatony ary fitaovana fitrandrahana asidra nokleôma mahery maherin'ny 30 tapitrisa ho an'ireo departemanta mifandraika amin'ny fiompiana kisoa sy ny quarantine.
Tao anatin'ilay valan'aretina pnemonia voan'ny coronavirus dia namaly haingana i TIANGEN Biotech vantany vao hitany fa nilaina maika ireo fitaovana hita maso. Ny harivan'ny 22 Janoary, ny vondrona mpanohana ny valan'aretina pnemonia coronavirus dia natsangana haingana hanamafisana miaraka amin'ireo orinasa any ambanivohitra sy ireo andrim-pitsikilovana momba ny fangatahana fitaovana maika, ary ny fizahana sy ny fanatsarana ny vahaolana fitrandrahana sy fitadiavana an'io valanaretina io. Nandritra ny Fetin'ny Lohataona dia niasa mihoatra ny ora izahay mba hitarika ny famokarana sy ny fanaraha-maso kalitao miaraka amin'ny kalitao sy ny habetsany azo antoka, ary koa ny fandrindrana ny rafitry ny lozisialy mba hanaterana ireo vokatra amin'ireo singa mifandraika amin'izany eo amin'ny laharana voalohany amin'ny valanaretina. Hatreto, TIANGEN Biotech dia nanolotra akora fototra iray tapitrisa mahery ho an'ny fitrandrahana asidra niokleika viriosy sy ireo mpamantatra ny habetsaky ny fluorescent ho an'ireo mpanamboatra reagena miharo 100 mahery ao Shina.
Tabilao 1 Reagentan'ny fandinihana RT-PCR fluorescent amin'ny fotoana maharitra ho an'ny Coronavirus Novel nankatoavin'ny fitondram-panjakana misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina.
mpanamboatra Santionany amin'ny detection Génie kendrena Reagentin'ny fitrandrahana Ferana famantaranaKopia / mL
Shanghai Biogerm Nasopharynx swab, sputum, BALF, santionany biopsy hozatra Zana ORFlab sy nucleoprotein Réagent amin'ny fitrandrahana biogerm 1000
Shanghai Geneodx Tondra-tenda sy BALF Zana ORFlab sy nucleoprotein Reagent Fitrandrahana Genolution Koreana (fitrandrahana mandeha ho azy) ary Reagentana fitrandrahana QIAGEN (52904, fomba fampiasa amin'ny tanana) 500
Shanghai Zhijiang Voadio, sputum ary BALF ORFlab, fototarazo nukleoprotein ary gene E Zagrion fitrandrahana Zhijiang na mpamindra fitrandrahana QIAGEN (52904) 1000
Bioteknologi BGI (Wuhan) Tondra-tenda sy BALF GeneFlab Mpiala fitrandrahana TIANGEN (DP315-R) na mpiorina fitrandrahana QIAGEN (52904) 100
Sansure Biotech Tondra-tenda sy BALF Zana ORFlab sy nucleoprotein Sansure famoahana agents (automatique fitrandrahana) 200
Daan Gene Voadio, sputum ary BALF Zana ORFlab sy nucleoprotein Reagent amin'ny fitrandrahana daan (fomba fitrandrahana paramagnetika) 500
Araka ny asehon'ny fikarohana sy ny valin'ny fanandramana andrana amin'ireo andrim-pianarana matihanina, ny vahaolana amin'ny detecta miaraka amin'ny vokatra TIANGEN Biotech ho akora fototra dia manana fahatsapana fitadiavana avo kokoa ho an'ny hafa amin'ny andrana mitovy amin'izany.
Ny rafitra fitrandrahana asidra nukôtika mandeha ho azy TIANGEN Biotech dia napetraka tao amin'ny foibe 20 mahery ho an'ny Fanaraha-maso ny aretina, hopitaly ary toeram-pitsaboana hafa ary nampiasaina nifandimby. Ny fitaovana mandeha ho azy dia nanatsara ny fahombiazan'ny fitrandrahana asidra niokrika ao amin'ireo singa hita maso ary manampy amin'ny fampihenana ny loza mety hitranga amin'ireo mpandraharaha. Ireo injenierantsika fitaovana dia nampiasa tanteraka ny teknolojia lavitra toa ny fitarihana horonan-tsary sy ny fanofanana horonantsary hanatsarana ny fahombiazan'ny fametrahana ary hampihenana ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina ateraky ny fikorianan'ny mpiasa.
Ny laboratoara mikrbiolojika ao amin'ny Longhua Center for Control of Disease dia mampiasa ny mpitrandraka asidra niôtika an'ny TIANGEN Biotech hitrandraka asidra niokleika.
Famerenana ny fizotry ny famonjena vonjy maika an'ny TIANGEN Biotech amin'ny fisorohana ny valanaretina
Tamin'ny 22 janoary (28 desambra amin'ny kalandrie lunar): TIANGEN fitantanana Biotech dia nametraka torolàlana avy hatrany: tohano ny fisorohana ny valanaretina am-pitoerana amin'ny lafiny rehetra! Tao anatin'ny adiny iray monja, ny "ekipa mpanohana ny fitaovana vonjy taitra" dia natsangan'ny manam-pahaizana avy amin'ny R&D, ny famokarana, ny fanaraha-maso kalitao, ny logistics ary ny teknolojia mba hanao drafitra sy ny famokarana mandritra ny alina.
Tamin'ny 23 Janoary (29 desambra tamin'ny kalandrie lunar): taorian'ny nifandraisany tamin'ny orinasa lozisialy folo mahery, ny andiam-pitrandrahana asidra niokleika viriosy voalohany sy ireo mpamantatra ny detection dia natolotra tamina sampana mifandraika amin'ny detection mifandraika amin'ny folo nanerana ny firenena farany.
Tamin'ny 24 Janoary (Taom-baovao Sinoa): Rehefa nihidy tany Wuhan, ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpamonjy voina dia niasa ora maraina mba hiantohana ny famatsiana fitaovana ampy. Nandritra izany fotoana izany dia nifandray tamin'ny fantsona rehetra izy ireo mba hahafahan'ny fitaovana ampitaina any amin'ny faritra faran'ilay valanaretina faran'izay haingana.
Tamin'ny 25 Janoary (andro voalohany amin'ny taom-baovao): miaraka amin'ny fanohanan'ny departemantan'ny fiarovana ny besinimaro, ny fitaterana, ny fifehezana ny aretina sy ny sisa, ireo mpitsikera ny fisavana nalefa tany Wuhan CDC any amin'ny faritanin'i Hubei dia nanomboka ny diany am-pilaminana taorian'ny fandrindrana maro. .
Tamin'ny 26 Janoary (andro faharoa amin'ny Taom-baovao), na dia vao mainka namparatsy ny làlan'i Wuhan aza, ny antoko rehetra dia niara-niasa mba handresy ny zava-tsarotra rehetra ary tonga soa aman-tsara tao Wuhan, faritanin'i Hubei ny andiany voalohany tamin'ny fitaovana fikarohana.
Tamin'ny 8 febroary, nifandray tamin'ny talen'ny Dongsheng Science Park ny Mpitondra Monisipaly ao amin'ny tanànan'i Shaoxing, tamin'ny fanantenana fa ny TIANGEN Biotech avy hatrany dia afaka manome andiam-pamokarana vokatra manokana hamoahana azy ho azy. Taorian'ny nahazoany ny taratasy dia nandamina haingana ny famokarana ny TIANGEN Biotech ny asabotsy sy alahady mba hamita ny famokarana ary ny sampana fanaraha-maso kalitao koa dia niasa ora fanaraha-maso kalitao haingana ireo vokatra manokana. Natolotra ny mpiasan'ny Biraon'ny Kaominin'i Shaoxing any Beijing io ny marainan'ny 10 febroary ary tonga tao amin'ny Shaoxing Center for Disease Control ny alin'io ihany.
Tamin'ny ady amin'ny valan'aretina sy ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana, TIANGEN Biotech dia nahazo fanohanana matanjaka avy amin'ny departemanta rehetra ao amin'ny governemanta. Noho ny fanafoanana ny firaketana ny fitaovana fitsaboana TIANGEN Biotech teo aloha vokatry ny fanovana ny faritra fitantanan-draharaha, niaraka tamin'ny fanampian'i Yan Mei, Sekretera ny Park Science sy Teknolojia Changping, TIAGNEN Biotech dia nifandray tamin'ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina ao amin'ny Distrikan'i Changping, izay nanokatra ny fantsona maintso avy hatrany araka ny tari-dàlana nasionaly ho antsika. Telo andro taty aoriana dia nahavita ny fanadinana mari-pahaizana TIANGEN Biotech sy ny asa fitoriana ny vokatra mifandraika amin'izany. Tamin'ny 14 Febroary, fohy ny akora simika amin'ny kitapom-bolan'ny TIANGEN Biotech, ny Komitin'ny Zhongguancun Haidian Science Park (Birao siantifika sy informatika ao amin'ny distrikan'i Haidian) dia nandefa taratasy tany amin'ny Birao Indostria sy Fampahalalana ao amin'ny distrikan'i Tianjin Wuqing handrindra ny famerenana. an'ireo mpamatsy akora hamerenana amin'ny laoniny haingana ny famatsian-tsakafo ao anatin'ny herinandro iray, hiantohana ny famatsiana mitohy ireo akora ilaina amin'ny ady amin'ny valanaretina NCP.
1.Loharanom-baovao sy loharanom-pahalalana: ny tatitra momba ny kaonty WeChat momba ny Gazety momba ny siansa momba ny laboratoara klinika: ny toeran'ny fikarohana sy ny fampiharana ny fikarohana Coronaavirus Pneumonia Novel "tamin'ny 12 feb. 2, Ivontoerana Jiangsu ho an'ny laboratoara klinika, Nanjing)
2. loharanom-pahalalana sary: ​​ny vaovao avy amin'ny kaonty WeChat momba an'i ilonghua tamin'ny 14 Febroary.